MANAMBONINAHITRA 107 NAVOAKA TAMIN’NY FOMBA OFISIALY
Navoaka tamin’ny fomba ofisialy teny amin’ny CEMES Fiadanana androany Alarobia 21 Martsa ireo Manamboninahitra 107 nahavita fiofanana.
Dimy volana no naharetan’ny fiofanana ho an’ireo manamboninahitra lefitra miisa 65, izay nisondrotra ho manamboninahitra, miampy ireo manamboninahitra nahavita ny fiofanana fototra tany amin’ny sekoly miaramila tany am-pitandranomasina na ny 20 èm CFCO. Hanomboka handray ny asany amin’ny maha manamboninahitra azy izy ireo aorian’izao fanolorana mari-pahaizana azy ireo izao.
Roa volana kosa no naharetan’ny fiofanana ho an’ireo manamboninahitra miisa 35 avy ao amin’ny adiany manokana faha-18, nivoaka tao amin’ny Akademia Miaramila ao Antsirabe, na ny 6 èm CFCO. Samy nahazo ny mari-pahaizana ahafahan’izy ireo miatrika avy hatany ny andrikitra amin’ny maha manamboninahitra azy ihany koa izy ireo.
Ny Sous-Lieutnant Randriamitantsoa, no namiratra ka nitana ny laharana voalohany teo amin’ny 20 èm CFCO. Ny Médecin-Lieutnant Rakotomanga Norosoa Mauricette, kosa no mendrika indrindra tamin’ny andiany 6èm CFCO.
Marihina fa ity andiany ity dia hitana manam-pahaizana maro, anisan’ireny ny dokotera, ny mpitsabo nify, ny mpampianatra, ireo injeniera isan-karazany, ny mpahay lalàna, ny mpahay toe-karena, ny veterinera… . Ary amin’izy ireo dia ahitana manamboninahitra vehivavy 15, izay vehivavy voalohany niofana tao amin’ny CPO.
Matoa tanteraka ny fiofanana natao hoy ny Lehiben’ny Etamazaoro Jeneralin’ny Tafika Malagasy, dia teo ny ezaky ny tsirairay sy ireo mpanohana toy ny Tafika Frantsay sy ny masoivoho Frantsay miasa eto an-toerana. Nanamarika ihany koa ny tenany fa na dia mandalo vanim-potoana sarotra toy izao aza ny firenena dia tsy mikely soroka ny fibaikoana ny Tafika
Fantatra fa hatramin’izay 39 taona niorenany dia manamboninahitra 1585 no efa nandalo fiofanana tao amin’ny CPO Fiadanana.